Sharuuda Uu Lionel Messi Hordhigayo Madaxweynaha Cusub Ee Barcelona Markii Ay Kulmaan Oo La Ogaaday - GOOL24.NET
Sharuuda Uu Lionel Messi Hordhigayo Madaxweynaha Cusub Ee Barcelona Markii Ay Kulmaan Oo La Ogaaday
Barcelona ayaa lagu waramayaa inay diyaar u tahay inay wadahadalo rasmi ah la bilowdo xiddigeeda Lionel Messi isbuucyada soo socda si ay ugala hadlaan mustaqbalkiisa halka kooxda ay sidoo kale raadineyso inay la soo saxiixato Sergio Aguero si uu uga dhaadhiciyo Messi inuu sii joogo Camp Nou.
Doorashada madaxweynaha cusub Joan Laporta ee isbuucii la soo dhaafay oo la sheegay inuu Messi isaga u codeeyay ayaa sarre u qaaday fursadaha ay Barcelona u heysato inay ceshato kabtankeeda kaasoo qandaraaskiisa uu dhacayo xagaagan.
Messi ayaa laga hor joogsaday inuu baxo sannadkii la soo dhaafay ka dib markii uu gudbiyay warqad uu ku dalbanayo inuu baxo laakiin cidna ma horjoogsan karto xagaagan iyadoo The Sun ay sheegtay in Messi uu ka doonayo Laporta inuu Barca ka dhigo mid tartan ka geli karta suuqa kala iibsiga xgaagaan ka hor inta uusan mustaqbalkiisa u hibeynin kooxda.
Warbixinta wargeyska ayaa lagu sheegay in Barcelona ay ka fiirsaneyso inay la soo wareegto xiddiga City ee qandaraaskisia dhacayo Sergio Aguero kaasoo ay saaxiibo dhow yihiin Messi si ay uga dhaadhiciyaan xiddigooda inuu sii joogo kooxda.
Laporta ayaan weli wax dalab ah hordhigin Lionel Messi sababtoo ah weli ma hayo barnaamij dhaqaale oo diyaarsan iyadoo deynta lagu leeyahay kooxda Camp Nou ka dhisan ay kor u dhaaftay hal bilyan ginni.
Waxaa la filayaa in Messi iyo aabihiis Jorge in lagu martiqaadi doono wadahadalo bisha soo socota. Sharuuda Lionel Messi kaliya ma ahan lacagta uu qaadnayo laakiin waxaa ugu weyn in Barcelona ay awood u yeelato inay la soo saxiixato xiddigo ay ugu tartami karaan hanashada Champions League.